Football Khabar » फिफाको नयाँ विश्व वरीयता सार्वजनिक : कसको स्थान कहाँ ?
फिफाको नयाँ विश्व वरीयता सार्वजनिक : कसको स्थान कहाँ ?
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले नयाँ वरीयता जारी गरेको छ । आज सार्वजनिक नयाँ वरीयताअनुसार नेपाल यथास्थानमा रहेको छ । नेपाल यसअघिकै १७०औं स्थानमा रहेको हो ।
यता, दक्षिण एसियाली वरियतामा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ । नेपालभन्दा माथि भारत १०८औं स्थानमा रहँदा माल्दिभ्स १५५औं स्थानमा छ । अन्य देश नेपालभन्दा मुनि छन् । जसमा बंगलादेश १८७औं स्थानमा रहँदा भुटान १८९ औं स्थानमा छ भने पाकिस्तान २००औं र श्रीलंका २०६ औं स्थानमा छ ।
यता, विश्व वरीयतामा भने यसपटक पनि बेल्जियम सबैभन्दा पहिलो स्थानमा छ । ऊ यसअघि पनि पहिलो स्थानमै थियो । त्यसपछि २०१८ को विश्वकपविजेता फ्रान्स दोस्रोमा रहँदा ब्राजिल तेस्रोमा छ । इंग्ल्यान्ड चौथो र उरुग्वे पाँचौंमा रहँदा त्यस्तै छैटौंमा क्रोएसिया तथा सातौंमा पोर्चुगल छ । आठौं स्थानमा स्पेन, रहँदा नवौं स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने १०औं मा कोलम्बिया रहेको छ ।
प्रकाशित मिति ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १८:४९